လင်္ကာ: မိခင်တစ်ဦး၏ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်း- အပိုင်း(၁)
ကျမရဲ့ မေမေ နှစ်ပေါင်း( ၂၀) ကျော်တိုင် သိမ်းထားခဲ့တဲ့ စာအုပ်ကလေး၊ သူ့ရင်ထဲက အကြောင်းတွေ ရိုးသားစွာ ရေးထားတာပါ။ တစ်ချိန်ကြ အားလုံးဖတ်ဖို့တဲ့။ ဘယ်သူတောင်းတောင်း လုံးဝ မပေးပဲထားတဲ့ စာအုပ်ကလေး၊ အရိုးတွန်သံကြောင့် သူလဲ သေတ္တာထဲက ထွက်လာခဲ့ပြီ။
ABSDF(မြောက်ပိုင်း)သတ်ဖြတ်မှုများနှင့်မိခင်တစ်ဦး၏ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်း- အပိုင်း( ၁ )
( ၃.၃.၁၉၉၂ )
ဒီနေ့ဒီရက်ဟာဖြင့် ကိုယ့်အဖို့ ဘယ်လိုမှမျှော်မှန်း မထားမိခဲ့တဲ့ အရာတခုကို တွေ့ကြုံရလိမ့်မယ်လို့ မထင်မိခဲ့ပါဘူး။နံက်၉နာရီအရောက် အလက(၄) ကို စတုတ္ထတန်းအဖြေလွှာစစ်ဆေးဘို့ အတွက်အိမ်က ထွက်လာခဲ့တယ်…ကျောင်းရောက်တော့ကိုယ် စစ်ဆေးရမဲ့ ENGLISH ဘာသာရပ်အတွက် နံပါတ်၁+၂+၃ ကိုစစ်ဆေးရတယ်….ဒီနေ့မှာလဲကျောင်းအလုပ်တွေက ဆုံနေတော့..
ဒီကပြီးရင် အခြေခံပညာသွားဘို့ ချိန်းထား တာလဲရှိတာနဲ့ ကိုယ်စစ်ရမဲ့နံပါတ်တွေအပြီးစစ်ဆေးပြီး ရင် နေ့လည်တစ်နာရီလောက် အခြေခံပညာသွားဘို့ အုပ်စုခေါင်းဆောင် ဆရာမကြီးကိုခွင့်ပန်လိုက်တယ်….ဆရာမကြီးကလည်း ခွင့်ပြုတယ်…
ဒါနဲ့နေ့လည်တစ်နာရီမှာကိစ္စပြီးပြီမို့ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကို ဆိုက်ကားနဲ့ထွက်လာလိုက်တယ်…
ရုံးရှေ့လဲရောက်ရောကိုယ့်ကျောင်းကအထွေထွေလုပ်သားနဲ့အမက(၁၆)ကအထွေထွေလုပ်သား (၂)ယောက် ထိုင်နေတာတွေ့ရတယ်…တွေ့တွေ့ချင်းဘဲကိုယ့်ကျောင်းက အထွေထွေလုပ်သားက ဆရာမကြီးအိမ်က စာလာပေးတယ်ဆိုပြီး စာထုတ်ပေးတယ်… အိမ်ကစာပေးလာတယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်ရင်ထဲထိတ်သွား တာပေါ့…
.......သားတွေသမီးတွေရေးပေးလိုက်တဲ့စာကို လဲလှယ်ဖတ်ကြည့်တော့ လက်ရေး မတူ ပေမယ့် စာသားကတစ်ပုံစံတည်းဖြစ်နေတာတွေ့ ရ တယ်… ဒါဆိုတွေးရတာပေါ့လေ…အကြပ်ကိုင်ပြီးရေးခိုင်းတာ လား လို့တော့ မိဘတွေကတွေးကြတာပေါ့…
မိဘတိုင်းကသားသမီးတွေဟာ ဘာအတွက်လုပ်တယ်ဆိုတာ သိတာဘဲ…ဒီလို န၀တ ထောက် လှမ်းရေး လုပ်တယ်လို့ ရေးထားတာ လိမ်ညာပြီး ရေးတယ်ဆိုတာ အားလုံးကသိနေကြ တယ်… သူတို့ရဲ့အသက်ဘေး ကြောင့်ရေးရတာဆိုတာကိုလည်း တွေးမိပါတယ်…
သားသမီးတွေကိုပထမ မွေးဖွားစဉ်က ဆေးရုံမှာအသက်စွန့်ပြီးမွေးခဲ့ရ သလို ခုလဲသားသမီးတွေကို ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားပေးကြရမှာ ဖြစ် တဲ့အကြောင်း ဒီတစ်ခါမွေးဖွားရတာက ပထမအကြိမ်မွေးဖွားတာ ထက် ခက်ခဲပြီး ပိုပြီး အသက်စွန့်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဖြစ်ကြတယ်…
စာကိုထုတ်ဖတ်လိုက်တော့ သူငယ်ချင်း ဆရာမကြီးက ရေးပေးလိုက်တဲ့စာ… အိမ်မှာဧည့်သည်နှစ်ယောက် ရောက်နေလို့ အမြန်ပြန်လာဘို့….နောက်ပြီးသားကိစ္စဆိုတာလဲပါတယ်…
ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်ရောက်နေမှန်းမသိတဲ့ သားဆီကလူကြုံလာတယ်ဆိုတော့ ၀မ်းသာအားရနဲ့ ဆိုက်ကား ငှားပြီး အိမ်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လာတယ်…
ရုံးကိုလဲကိုယ့်အထွေထွေလုပ်သားနဲ့ဘဲ အခြေခံပညာ မသွားတော့ဘူးလို့ ပြောခိုင်းလိုက်တယ်…. အိမ်ကိုကားစီးသွားရင်တစ်ကျပ်ပဲကုန်မယ်ဆိုတာ သိရဲ့သားနဲ့ ကားစောင့်ရင်ကြာမှာစိုးလို့ ဆိုပြီး ဆိုက်ကားငှားစီးသွားတာ… ဆိုက်ကားကလဲနှေးလိုက်တာ….ရောက်ချင်ဇောနဲ့ဆင်းပြီးတောင် ပြေးချင်စိတ် ပေါက်လာတယ်
…နောက်မှဘဲ အချိန်တန်တော့ရောက်မှာဘဲဆိုပြီး ကြိတ်မှိတ်ပြီးလိုက်လာတယ်… ဒါနဲ့အိမ်နားရောက်လာတယ်…အိမ်ကိုအမြန်ပြေးဝင်လာတာပေါ့…
အိမ်ထဲကိုမ၀ံ့မရဲနဲ့ဝင်လာတော့ ကိုယ့်အမျိုးသားနဲ့ဧည့်သည်(၂)ယောက်တွေ့ရတယ်…ကိုယ်ကလဲ ကိုယ့်အမျိုးသားကို ရှင်ကဘယ်လိုရာက်နေတာလဲမေးတော့ မင်းရဲ့သမီးစုနန္ဒာလွင် ဖုန်းဆက်လို့ ပြန်လာရတာတဲ့.
ကဲမင်းသားရေးလိုက်တဲ့စာဖတ်အုံးဆိုတော့ ဧည့်သည်နှစ်ယောက်ကို နှုတ်မဆက်မိဘဲ စာကိုအလောတ ကြီး ဖတ်လိုက်တယ်…
စာထဲမှာက…အဖေနဲ့အမေတဲ့…ကျွန်တော်ဟာ န၀တ ထောက်လှမ်းရေးလုပ်မိလို့ ကျွန်တော့်ကို ကျောင်း သားတပ်မတော်က ဖမ်းထားပါတယ်တဲ့…အဲဒါ ကျွန်တော့်ရဲ့အသက်ရှင်ရေးအတွက် အဖေနဲ့အမေ တယောက် ယောက်လာရောက်အာမခံပြီးခေါ်မှ အသက်ချမ်းသာရမှာလို့ သူရှိရာတပ်စခန်းကို အမြန်ဆုံးလိုက်လာဘို့ ခေါ်တဲ့ စာဖြစ်နေတယ်…
ဒါနဲ့ကိုယ်လဲအရမ်းကို စိတ်တွေထူပူလာပြီး ဒီစာကိုဘယ်လိုရတာလဲ… ဘယ်သူကပေးလိုက်တာလဲ မေးတော့… စောစောကဧည့်သည်နှစ်ယောက်ထဲက ကိုမောင်မောင်ဆိုတဲ့သူက သူပြီးခဲ့တဲ့ဇန္န၀ါရီလက သူ့ညီလဲ အဲဒီထဲရောက်နေတာ အရဲစွန့်သွားတာ ဟိုရောက်တော့ကျောင်း သား (၈၀)ကျော်ကိုဖမ်းထားပြီး န၀တ ထောက် လှမ်းရေးလို့စွပ်စွဲပြီးတော့ (၁၅) ယောက်ကို သတ်လိုက်ကြ တယ် … ကျန်တဲ့(၆၅)ယောက်ထဲက စီစစ်ပြီး မိဘလက် ထဲပြန်အပ်သင့်တဲ့သူကို ပြန်အပ်မယ်…
သူတိုနဲ့လက်တွဲရမယ့်လူကို ဆက်ပြီးလက်တွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ သူ့ညီအပါ အ၀င် ကျွန်မတို့မိဘ(၆)ဦး နဲ့ ပေါင်း(၇)ဦးကိုခေါ်ပေးပါဆိုလို့ ဒီစာနဲ့အတူလာရတဲ့အကြောင်း စခန်းကို(၂၀)မတ် အရောက် သွားရမဲ့အကြောင်း လိုက်မယ်ဆိုရင်လဲမန္တလေးကို (၁၂.၃.၉၂) အရောက်လာဘို့အကြောင်း ပြောပြီး သူ့လိပ်စာနဲ့ သူ့ကိုမယုံမှာစိုးလို့ မန္တလေးထောက်လှမ်းရေးကဗိုလ်ကြီးနာမည်နဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးတယ်…
လှမ်းပြီးမေးကြည့်ပါတဲ့…နောက်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင် ကလေးတွေအတွက်အ၀တ်အစား ကိုယ်တို့လိုက်မဲ့ သူတွေအတွက် အနွေးထည် ခြေအိပ် လက်အိပ် ခေါင်းစွပ်ကစ လုံလုံလောက်လောက် ယူခဲ့ဘို့ အကြောင်းနဲ့…. ရန်ကုန်ကကိုယ်နဲ့ဘ၀တူလိပ်စာတွေလဲပေးခဲ့တယ်… ကိုယ်လဲဒါဖြင့် နယ်မြေထောက်လှမ်းရေးကို သတင်းပို့မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ ရပါတယ်ပို့ပါတဲ့… သူလဲအားလုံးကိုသတင်းပို့ပြီးမှ လာတာပါလို့ပြောတယ်…
အဲဒီလိုပြောနေတုံးမှာဘဲ နယ်မြေထောက်လှမ်းရေးက (၂)ယောက်ရောက်လာပြီး ဧည့်သည်(၂)ယောက် ကိုအကျိုးအကြောင်းမေးတော့ ကိုမောင်မောင်က သူသွားခဲ့ရပုံနဲ့ ခုထိအခြေအနေကိုရှင်းပြတယ်… ဒါနဲ့ကိုမောင် မောင်တို့နှစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်မသားစာကိုပါယူသွားပြီး ကားနဲ့ခေါ်သွားတယ်…ဒါနဲ့ဘဲကိုယ်လဲ ကိုမောင်မောင်နဲ့ စကားသိပ်မပြောလိုက်ရဘူး… .ခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာထင့်နေတာပေါ့…လိမ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ ဘာဖြစ် ဖြစ်ပေါ့ ….စေတနာနဲ့လာတဲ့သူတွေဆိုရင်အားနာစရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့…ဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့လေ…
ကဲ ....မင်းဘဲလိုက်ရမှာ…မင်းသားကိစ္စဘဲ…ငါ့တော့ကို မောင်မောင်က မလိုက်ရဘူးပြောတယ်… ဒါနဲ့ကိုယ်လဲလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…ကဲ ကိုယ်လိုက်ရင် ကိုယ့် ကိုဟိုဘက်ကသူပုန်က သတ်ပစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ …မတတ်နိုင်ဘူးလေ… သတ်ပစ်လဲသတ်ပစ်… ဖမ်းလဲဖမ်းပါ စေ… ငါ့သားအသက်ရှင်ရေးအတွက် သွားကိုသွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…
အဲဒါနဲ့ဘဲ ကန်ဘဲ့လမ်းက အန်ကယ်ကြီးရောက်လာတယ်… စာလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ သွားရင်အား လုံးတိုင်ပင်ပြီး သွားကြဘို့လာပြောတယ်…၀ဏ္ဏဇော်အိမ်ကိုလာရှာတာ မတွေ့သေးတဲ့အကြောင်းပြောတယ်…
ကိုယ်လဲသူတို့ ဇီးကွက်မှတ်တိုင်နားမှာ နေတဲ့အကြောင်း သွားပြောပေးမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြော လိုက်တယ်…အန်ကယ်ကြီးတို့က ဖေဖေါ်ဝါရီလမတိုင်ခင်ကတည်းက သိနေတယ်ဆိုတာ နောက် မှသိရတယ်.။ကိုမောင်မောင်လဲ သာယာဝတီနဲ့ပဲခူးကမိဘတွေဆီ ဆက်ပြီးသွားရမှာဆိုတဲ့အကြောင်း သိရတယ်…
စာရတဲ့နေ့ကကိုယ်တို့လင်မယားနှစ်ယောက် မအိပ်နိုင်ကြဘူး…. သားဆီကစာအကြောင်းဘဲစဉ်းစားနေကြတယ်..
စစ်တပ်ကဘဲဖမ်းမိလို့ နယ်စပ်တနေရာကနေခေါ်ပြီး မိဘထံပြန်အပ်ဖို့လား…ABSDF ကဖမ်းထားတာဆိုတော့…ကိုယ့်သားကစပြီးလှုပ်ရှားကတည်းက ကျောင်းသားဖက်က ဒီမိုကရေစီရရှိဘို့အတွက် ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါတယ်..
ပါတီထောင်ပြီးဒုဥက္ကဋ္ဌလုပ်တယ်…နောက် န၀တ အစိုးရကဖမ်းမှာစိုးလို့ တိမ်းရှောင်နေတယ်ဆိုတာ ဘဲ သိတယ်…ဘယ်နေရာရောက်နေလဲဆိုတာမသိဘူး…
ဒါပေမယ့်သူတို့ဟာန၀တဆန့်ကျင်ရေးလုပ်တဲ့သူတွေဆို တော့ တောတွင်းတနေရာရောက်နေမှာဘဲလို့ ထင်တယ်…နှစ်ကလည်း(၂)နှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့ သူ့အတွက် စွန့် လွှတ်ပြီး ပူပန်သောကတွေကို ဘုရားနဲ့ဖြေပြီးနေရတယ်… ဘုရားဖက်တော့ အသက်ရှည်ဆိုသလို ကိုယ်လဲ အရင် ကလို တပိန်ပိန် တလိန်လိန် မဟုတ်တော့ဘူး….. ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး စိတ်ချမ်းသာမှုရနေတာပေါ့လေ…
တနေ့တော့မသေရင်ပြန်တွေ့ရမှာဘဲလို့ ယူဆပြီးစိတ်ဖြေနေရတယ် …ဗေဒင်တို့အကြားအမြင်တို့မေး လိုက်ရင်လည်း အသက်ရှင်လျှက်ရှိတယ်… မကြာခင်သတင်းစကားဖြစ်စေ လူဖြစ်စေအဆက်အသွယ်ရမယ်…
လို့ဟောထားတော့ ငါ့သားတော့မသေသေးဘူး လို့ဆိုပြီး စိတ်ကိုဖြေနေရတဲ့အချိန်မှာ ဒီစာကိုရလာတော့ အိပ်မ ပျော် စားမ၀င်နဲ့ တိုင်ပင်လိုက် ဆွေးနွေးလိုက်နဲ့ အဲဒီညကအချိန်ကုန်တာပါဘဲ….
သူ့အစ်မကြီးရှိတဲ့ ဒဂုံမြို့သစ်ကိုသွားပြောခိုင်းလိုက်တော့ ၀မ်းသာလွန်းလို့ သူလာခဲ့မယ်ဆိုတာပြော လိုက် တယ်… သတင်းအစအနပျောက်နေတဲ့သားဆီက စာလေးတစောင် ရောက်လာလို့ တအိမ်သားလုံး ၀မ်းသာမဆုံး တွေးတောမဆုံး ဖြစ်နေရတယ်….
( ၄.၃.၁၉၉၂ )
ကိုယ်တို့ကျောင်းကလည်း မပိတ်သေးတော့ စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေပေမယ့် ကျောင်းကိုသွား ရုံးကို သွားနေရ တယ်…ရုံးမှာလဲဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စကရှိနေသေးတော့ ရုံးကိုအမြဲသွားနေရတယ်… ကိုယ့်ကိစ္စလဲလုပ်ရင်း၊ကျောင်းကိစ္စလဲ လုပ်ရင်း ပေါ့လေ… ရုံးရောက်တော့ အစ်မကြီးလိုခင်တဲ့ ဆရာမကြီးကိုပြောပြတော့ ညကBBC ကလည်းကျောင်း သားတွေအကြောင်း အသံလွှင့် တဲ့အကြောင်းပြောတော့ ပိုပြီးစိတ်ပူနေတာပေါ့….
ကိုမောင်မောင်ပြန်လာတာက ကြာပြီဆိုတော့ ဒီကြားထဲ မှာများသတ်များသတ်ပစ်လိုက်ပြီလား…. အသက်မှရှိသေးရဲ့လားနဲ့ပူနေရတာပေါ့…
အမျိုးသားကလည်း သူရုံးမသွားခင် ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးကဗိုလ်မှူးတစ်ယောက်နဲ့ ဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက်လာတဲ့အကြောင်း…ဒီစာကိုရတဲ့အတွက်သွားပါလို့မတိုက်တွန်းကြောင်း…..
လူမှုရေးကိစ္စဖြစ်နေတော့ သူတို့အနေနဲ့ဘာမှမပြောလိုကြောင်း တကယ်လို့သွားမယ်ဆိုရင်လည်း သူတို့ဆီကို သတင်းပို့ပါလို့ ပြောသွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ NATIONS သတင်းစာမှာ
- ကျွန်မတို့ကလေး( ၇ ) ယောက်ထဲက(၃) ယောက်နဲ့ တစ်ခြားကလေး(၂)ယောက် (၅) ယောက်ပုံပါလာပြီး ကျောင်းသားတွေရဲ့လုပ်ရပ်ကို ရေးထားတဲ့ အကြောင်း ဓာတ်ပုံလည်းပြတယ်တဲ့… အဲဒီထဲကမိန်းကလေးက အန်ကယ်ကြီးသမီးဖြစ်နေတယ်…
ဒါနဲ့ကိုယ်တို့လင်မယားလည်း…မအိပ်နိုင်မစားနိုင်နဲ့ သားရဲ့စာသားရဲ့ကိစ္စကိုဘဲ အမျိုးမျိုး ထင်ကြေးတွေ ပေးပြီး တစ်ညကုန်ရတော့တာပါဘဲ….
အမျိုးသားကိုလည်းသွားဘို့ကိစ္စ၀ိုင်းပြီးငွေရှာ ပေးဘို့ပြောတယ်…သူလည်းမရှာတတ်ဘူးတဲ့… ပိုက်ဆံမရှိရင်မသွားနဲ့လို့လည်းပြောပြန်ရော…ဒါနဲ့ကိုယ်လည်း ကျောင်းနဲ့ရုံးကိုသွားတယ်….
အဲဒီနေ့လုပ်သားသတင်းစာထဲမှာ မကဒတ(မပ)ကကျောင်းသား(၈၀)ဖမ်းပြီး န၀တ ထောက်လှမ်းရေး လို့ စွပ်စွဲထားတဲ့အကြောင်း (၁၅)ဦးကိုသတ်ပြီး ကျန်တဲ့သူတွေကို မိဘဆီအပ်မည့်သူနဲ့ သူတို့နဲ့ပြန်လက်တွဲ မည့်သူ တွေကိုစီစစ်နေတယ် ဆိုတဲ့သတင်းလဲဖတ်ပြီးရော ရုံးကခွင့်ယူထားတဲ့လူက သူ့သားအတွက် အရမ်းစိတ်ပူသွားပြီးရုံးသွားတက်တယ်…ညနေကျတော့ ငွေ၃၀၀၀ကျပ် ကိုယ့်ကိုလာပေးတယ်…
အဲဒီနေ့မှာဘဲ မနက်ပိုင်း ၀ဏ္ဏဇော်အမေ ဒေါ်ရီရီခင်ဆီသွားတော့သူအတော်အံ့သြနေတယ်…
ကိုယ်ပါမှန်း လိုက်မယ်မှန်းသိတော့ သူလိုက်မယ်တဲ့…အစကတော့မသိတဲ့သူတွေနဲ့ သွားရမှာ ဆိုတော့ သူလိုက်ဘို့စဉ်းစားနေရတယ်တဲ့…ကိုယ်လည်းသူပါတယ်ဆိုတော့ အားရှိသွား တာပေါ့… .လမ်းမှာဘာကိစ္စဘဲဖြစ် ဖြစ် ကိုယ်နဲ့တိုင်ပင်ဖေါ်ရတာပေါ့….
ညနေကျတော့အန်ကယ်ကြီးတို့လင်မယားရောက်လာကြတယ်…အတူသွားရမဲ့လူတွေရင်းနှီးအောင်လို့ ဆိုပြီး ခေါ်လာတဲ့အကြောင်းနဲ့ သားတွေသမီးတွေရေးပေးလိုက်တဲ့စာကို လဲလှယ်ဖတ်ကြည့်တော့ လက်ရေး မတူ ပေမယ့် စာသားကတစ်ပုံစံတည်းဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်… ဒါဆိုတွေးရတာပေါ့လေ…အကြပ်ကိုင်ပြီးရေးခိုင်းတာ လား လို့တော့ မိဘတွေကတွေးကြတာပေါ့…
သွားဘို့ရက်ကိုလည်း ( ၁၁.၃.၁၉၉၂ ) ရက်နေ့သွားဘို့ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်… သားသမီးတွေကိုပထမ မွေးဖွားစဉ်က ဆေးရုံမှာအသက်စွန့်ပြီးမွေးခဲ့ရသလို ခုလဲသားသမီးတွေကို ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားပေးကြရမှာ ဖြစ် တဲ့အကြောင်း ဒီတစ်ခါမွေးဖွားရတာက ပထမအကြိမ်မွေးဖွားတာ ထက် ခက်ခဲပြီး ပိုပြီး အသက်စွန့်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဖြစ်ကြတယ်…
ကိုယ်ကလည်းမန္တလေးကို လုံးဝမရောက်ဖူးတော့အန်ကယ်ကြီးတိုနဲ့တဲတာကအစ နေတာအဆုံး အတူလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်…အန်ကယ်ကြီးကလက်မှတ်ဝယ်တဲ့အခါ အထက်တန်းလက်မှတ်ဝယ် မယ်လို့ ပြောသွားတယ်…ကိုယ်တို့ကငွေရေးကြေးရေးကသူတို့လောက်အစဉ်မပြေတော့ ရိုးရိုးတန်းကဘဲ လိုက်မယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်… အဲဒီအကြောင်းအမျိုးသားပြန်လာတော့ပြောပြတယ်…
သူက အထက်တန်းကဘာမှပိုကုန်တာ မဟုတ်ဘူး… အထက်တန်းကဘဲသွားဆိုလို့အထက်တန်းကဘဲယူဘို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်..
( ၆.၃.၁၉၉၂ ) နဲ့ ( ၇.၃.၁၉၉၂ ) မှာတော့ ကျောင်းကိစ္စ ရုံးကိစ္စနဲ့ဘဲအချိန်ကုန်တယ် …ကျောင်းကဆရာမ တွေကို အကျိုးအကြောင်းပြောပြီး လွှဲစရာရှိတာလွှဲ မှာစရာရှိတာမှာနဲ့ ဘဲအချိန်ကုန် သွားတယ်…အိမ်ပြန်ရောက် တော့လည်း ကိုယ့်ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ သားအတွက်ဓာတ်ပုံစီစဉ်ရတယ်… သားအတွက်လိုင်စင်ဓာတ်ပုံကမရှိတော့ ကျောင်းမှာ စာအုပ်ထုတ်တဲ့ကဒ်ပြားကပုံကိုဘဲကူးယူရတယ်… ကူးလဲပြီးရော ဓာတ်ပုံပေါ်မှာ လုပ်သားကောလိပ်လို့ ပါနေတာ ကူးလိုက်တော့ လုပ်သားကပျက်ပြီး တပ်သား လို့ပေါ်နေတယ်…အလိုလိုကမှ န၀တ ထောက်လှမ်းရေး လို့စွပ်စွဲနေရတဲ့အထဲ ဓာတ်ပုံမှာတပ်သားလို့ ပါနေတော့ ကတ်ကျေးနဲ့ညှပ်ပစ်လိုက်ရတယ်…
( ၈.၃.၁၉၉၂ )
ဒီနေ့မှာဒေါ်ရီရီခင်အိမ်သွားပြီး လက်မှတ်ဝယ်ဘို့ကိစ္စရှိတာကြောင့် အန်ကယ်ကြီးအိမ်(3/C ) ကန်ဘဲ့ကို သွားတော့ ကိုယ်တို့ရှေ့မှာတင် ကားတစ်စီးဝင်သွားတယ်…အထဲရောက်တော့ စမ်းချောင်း ကဧည့်သည် (၂)ယောက် လည်းရောက်နေတယ်…အားလုံးတိုင်ပင်ကြပြီး ဟိုရောက်ရင် ဘယ်လိုပြော ဘယ်လိုနေ ဆိုတာတွေ ကိုအန်ကယ်ကြီးကပြောပြတယ်… စမ်းချောင်းကဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည်တို့သားအမိလည်း လိုက်မယ်လို့သိရတယ်… လက်မှတ်ကို မနက်ဖြန်မနက်ဝယ်ရအောင် ဘူတာကြီးမှာဆုံဘို့ချိန်းခဲ့ကြတယ်…
ပြီးတော့မှကိုမောင်မောင်တဲတဲ့မြကန်သာဟိုတယ်ကို ဒေါ်ရီရီခင်နဲ့သွားခဲ့ကြတယ်…မတွေ့ခဲ့ရလို့ စာရေး ထားခဲ့ရတယ်…ည၉နာရီဖုန်းထပ်ဆက်မှတွေ့ရတယ်…ကိုမောင်မောင်က ဦးဇော်ခင်သူတည်းတဲ့နေရာကို ဘယ်လို သိလဲမသိဘူး…ရောက်လာပြီးတော့…ဟိုတယ်ရှေ့ကနေ…
မန္တလေးက MI နှစ်ယောက်ထွက်လာခဲ့ဆိုပြီးအော်နေတယ်တဲ့… ဆဲနေတယ်တဲ့…ချော့ခေါ်ပြီးအရက်နဲ့ဧည့်ခံလိုက်ရတယ်တဲ့… အရက်ဖိုးကိုလည်း ခင်ဗျားက
MI ဆိုတော့ ဒီဘက်မှာစာရင်းပြတောင်းပေါ့… မဟုတ်လဲဟိုဘက်ကဆိုရင်လဲ…ဟိုဘက်ကသူပုန်ဆီမှာစာရင်းပြ တောင်းဆိုပြီး ပြောသွားတယ်တဲ့…
ကိုမောင်မောင်လည်းမနက်ဖြန်ည၉နာရီ ပြန်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်…မန္တလေးကို၁၂.၃.၉၂ အ ရောက်လာမယ်ဆိုတာလည်းပြောလိုက်တယ်…
( ၉.၃.၁၉၉၂ )
မနက်၎နာရီ ရထားလက်မှတ်သွားတန်းစီရတယ်…လက်မှတ်တန်းစီတာကျော်ပြီးစီလို့ တရုပ်မ၃ယောက်နဲ့စကားများရသေးတယ်…အားလုံးအတွက် အထက်တန်းကချည်းရတယ်….. သာယာဝတီကတစ်ယောက်လည်းပါ တယ်…..ပဲခူးကမိဘတစ်ယောက်ကသူ့အစီအစဉ်နဲ့သွားပြီး မန္တလေးကျမှဆုံမယ်လို့သိရတယ်…..
လက်မှတ်ဝယ်ပြီးမိဘတွေကခုမှသိရတာဆိုပေ မဲ့ ဘ၀တူတွေဆိုပြီး ပိုပြီး ခင်မင်မှုရကြတယ်…..
ရထားလက်မှတ်ရပြီးတာနဲ့ ကျောင်းမှာမိဘဆရာအသင်း အစည်းဝေးရှိလို့ သွားရတယ်… နာယက(ရ၀တ)ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စာရင်းစစ်(မိဘ)တို့လာတယ်….. ခရီးသွားမည့်အကြောင်း…ကျောင်းကိုအပ်ထားခဲ့တဲ့အကြောင်း…ပြောခဲ့ရ တယ်… လုပ်စရာရှိတာတွေ…ဆရာမအတွင်းရေးမှူးနဲ့…အဖွဲ့ဝင်ဆရာမကိုမှာခဲ့ရတယ်…..
( ၁၀.၃.၁၉၉၂ )
ဆရာကြီးကိုဝင်တွေ့ပြီး သားကိစ္စသွားမယ့်အကြောင်းနဲ့ ခွင့်စာတင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်… ..ပြောပြီးရုံးမှာဆရာမကြီးတစ်ယောက်နဲ့ ထိုင်နေတုံး ဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ရောက်လာပြီး ခဏလိုက်ခဲ့ပါ…
ကိုယ့်သားသမီးရရှိရေးအတွက်အတိုက်အခံပြောရတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကိုပုတ်ခတ်ပြီးမပြောဘို့ပြော တယ်…အဲဒီတော့ကိုယ်က…ဗိုလ်မှူး…ကျမဟာ…ကျမလုပ်တဲ့ဆရာမအလုပ်ကို…၀ါသနာပါလွန်းလို့လုပ် လာတာပါ…၂၈ နှစ်တောင်ရှိပါပြီ….ကျမအလုပ်ကိုထိခိုက်မဲ့စကား….နိုင်ငံတော်ကိုထိခိုက်မည့်စကား… သစ္စာဖေါက်တဲ့ အလုပ်ကိုမလုပ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်…..
ဟိုဘက်ကသိရင်ကလေးတွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်မှာစိုးလို့ ပြောပြီး…အားလုံးအစဉ်ပြေမှာပါလို့ပြောတယ် …..ကျမကရုံးမှာ နေခဲ့ပြီး ဒေါ်ရီရီခင်ကိုတော့ ဓာတ်ပုံရွေးစရာရှိတယ်ဆိုလို့ မြို့ထဲကိုလိုက်ပို့လိုက်ကြ တယ်…..
အိမ်ရောက်တော့ မနက်ခရီးထွက်ဘို့လိုအပ်တာတွေဝယ်ရတယ်…..ဒေါ်ရီရီခင်ကိုလည်း အိမ်လာအိပ်ဘို့မှာထားတာ…၈နာရီထိမလာသေးလို့…ဆိုက်ကားအသွားအပြန်ငှားပြီးလိုက်သွားတယ်
( ၁၁.၃.၁၉၉၂ )
မနက်၂နာရီလောက်ထဲကနိုးနေကြတယ်….မနက်၎နာရီထိုးတော့သမီးတစ်ယောက်နဲ့အတူ ဘူတာကိုဆင်းကြတယ်…..ရထားပေါ်တက်တော့အန်ကယ်ကြီးတို့လင်မယား၂ယောက်၊မမြင့်ကြည်တို့ သားအမိ၂ယောက်သာယာဝတီကတစ်ယောက်….နောက်မှဦးအေးနိုင်မှန်းသိတယ်….. ရထားထွက်တော့လိုက်ပို့တဲ့သူတွေပြန်သွားကြတယ်…..မနက်၆နာရီရထားထွက်တော့ဝမ်းသာဝမ်းနဲပေါ့….. ၀မ်းသာတာကများပါတယ်….ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သားသမီးတွေကို သွားခေါ်ရမှာဆိုတော့ ၀မ်းသာနေကြတာပေါ့…. .ပဲခူးကျော်တာနဲ့ဝဲယာတောင်တန်းကြီးတွေတွေ့ရ တယ်….. ပျဉ်းမနားကျော်တော့ကိုယ်မရောက်ဘူးသေးတဲ့ဒေသမို့…အသစ်အဆန်းတွေဖြစ်နေတယ်….
မန္တလေးရောက်တော့အန်ကယ်ကြီးတို့အဒေါ်အိမ်ကို သွားကြတယ်….ရေမီးအစုံနဲ့ဆိုတော့ တည်းရတာအစဉ်ပြေပါတယ်…..
( ၁၂.၃.၁၉၉၂ )
သွားတယ်…..ခရီးထွက်ဘို့တစ်ယောက်၁၀၀၀ကျပ်စီပေါင်းကြတယ်…..ကိုမောင်မောင်က ခေါင်းဆောင်သွား မှာဆိုတော့ ပူးတဲ့ငွေသူ့ကိုအပ်ထားကြတယ်…..လားရှိုးလက်မှတ်ကို ကိုမောင်မောင်ဘဲ သွားဝယ်တယ်…..
( ၁၃.၃.၁၉၉၂ )
မိဘတွေလိုက်သွားမယ်ဆိုလို့သူလဲလိုက်ချင်တဲ့အကြောင်းဇွတ်ပြောနေလို့ ခေါ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာပြော တယ်…..ကိုမောင်မောင်နဲ့အားလုံးကလည်းသက်ဆိုင်ရာမိဘတွေ သာခေါ်ခိုင်းတာမို့လူပိုမခေါ်ခဲ့ဘို့မှာထားတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပြီးစာပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ပေးပေးပါ့မယ် လို့ပြောလိုက်ကြတယ်…..
( ၁၄.၃.၁၉၉၂ )
ကျောင်းသားထောက်လှမ်းရေးကမှာတယ်ဆိုတဲ့ ဒေါ်မြရင်ဝက်အူချောင်းတစ်ပိဿလည်း ၀ယ်ခဲ့ကြရတာမှတ်မိတယ်…ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရေမိုးချိုးပြီး အ၀တ်၃စုံဘဲထည့်ထားပြီး မလိုတာတွေကို မန္တလေးမှာဘဲထားခဲ့ကြ တယ် ….အိမ်ရှင်တွေကိုဘုရားဖူးဆက်ထွက်မယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့ရတယ်…..
( ၁၅.၃.၁၉၉၂ )
နံက်၎နာရီအဝေးပြေးဂိတ်ကိုသွားကြတယ်…..အဲဒီမှာကိုမောင်မောင်နဲ့ပဲခူးကအန်တီစန်းတို့နဲ့တွေ့ တယ်.အဲဒီမှာကျောင်းသားအဖွဲ့ကမှာလိုက်တဲ့ လမုန့် ထိုးမုန့်တို့ကို ကိုမောင်မောင်က၀ယ်လာတယ်…
…ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည်အမေကအစမှာဟိုအထိလိုက်ဘို့ဘဲ…လူပိုမလိုက်ရဘူးဆိုလို့မန္တလေးမှာကျန်ခဲ့တယ်… ၁၆.၃.၉၂မှာအန်ကယ်ကြီးနဲ့အတူပြန်ဘို့စီစဉ်ထားတယ်…ကျန်ခဲ့တဲ့အန်တီစန်းအမျိုးသား နဲ့ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည် အမေ ဒေါ်တင်တင်တို့ကလက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးကျန်ခဲ့တယ်…..
မန္တလေးကစထွက်တော့သားတွေနဲ့တွေ့ဘို့နီးပြီဆိုပြီးဝမ်းသာကြတာပေါ့…ကျောက်မဲမြို့နယ် ထဲရောက်တော့၁၁း၀၀နာရီလောက်ရှိပြီ….အန်ကယ်ကြီးကကျောက်မဲမှာဆင်းနေခဲ့တယ်… သူလည်းအန်တီကြီးအတွက်စိတ်မချလို့အတန်တန်မှာတယ်…ကိုယ်တို့ကလည်းမိဘလိုသဘောထားပြီး
ကောင်းအတူဆိုးအတူကူညီပြီးသွားပါ့မယ်လို့မှာခဲ့ကြတယ်…လားရှိုးကို၎း၃၀လောက်ရောက်တယ်…. ဂိတ်နဲ့နီးတဲ့တည်းခိုခန်းမှာဘဲတည်းကြတယ်…ပိုင်ရှင်ကဆရာမတစ်ယောက်ပဲ…သဘောလည်းကောင်းတယ်…ကိုယ်တို့ကတော့ ပစ္စည်းစုံအောင်စစ်ပြီးနားကြတယ်…ကိုမောင်မောင်ကမနားရဘူး….လားရှိုးထောက်လှမ်းရေး၉ကိုသ တင်းပို့ ရသေးတယ်…
တာဝန်မှူးနဲ့ဘဲတွေ့ပြီးမှာခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောတယ်…မနက်ခရီးဆက်ထွက်ဘို့ လက်မှတ်ကြိုဝယ် ရတယ်.
( ၁၆.၃.၁၉၉၂ )
မနက်၅း၀၀နာရီထိုးတော့ ကားဂိတ်သွားပြီး မူဆယ် လားရှိုး နမ့်ခမ်း ကားပေါ်တက်ကြတယ်… ၅း၃၀မှာကားစထွက်ပြီး လားရှိုးအထွက်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ အစစ်ဆေးခံဘို့ ကားတွေတန်းစီစောင့်ကြရ တယ်…စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေက၇း၃၀မှလာကြမှာကိုး….
ရှာဖွေရေးအဖွဲ့တွေက တစ်ကားပြီးတစ်ကားတက်ရှာလိုက် စီးတဲ့လူမှတ်ပုံတင်စစ်လိုက်နဲ့ ကိယ်တို့(၆)ယောက်အစဉ်ပြေပြေဘဲကားပေါ်ပြန်တက်ရတယ်….ကိုမောင်မောင်အလှည့်ကျတောဲ့ပြဿနာ တက်တော့တာဘဲ..မွတ်ဆလင်ကုလားတွေကို တရုပ်ပြည်နယ်စပ်ဘက်မသွားဘို့ဆိုပြီး ညွှန်ကြားချက် ထုတ် ထားတယ်တဲ့…..
ဘယ်လိုမှပြောလို့မရဘူး…မူဆလင်ဆိုပေမယ့်နိုင်ငံသားကဒ်ကိုင်ထားတာပါ…..ကိုယ်တို့ကကားပေါ်က စောင့်နေတယ်…တစ်နာရီလောက်ကြာလာတော့ကားပေါ်ကသူတွေ ပွက်လောရိုက်ကုန်ရော… အချိန်မှီ ရောက်ချင်တယ်….သူ့ကိုထားခဲ့ပြီးကားထွက်ပါလို့ ပြောကြတယ်…
ဖုန်းဆက်၊ထောက်လှမ်းရေး၉ကိုဖုန်းဆက်နဲ့အလုပ်များသွားတယ်…တည်းခိုခန်းမှာ နေတုံး ၁း၀၀နာရီမှာ ထလရ၉ကဗိုလ်ကြီးက အားလုံးနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ သွားရတယ်…. .ဗိုလ်ကြီးသုတဆွေကိုတွေ့တယ်…တပ်မှူးကိုလည်းတင်ပြထားကြောင်း သွားမည့်သူအမည်နဲ့ သားတွေရဲ့ အမည်ကိုမှတ်ထားလိုက်တယ်…မြို့နယ်မှူး(လ၀က)ကို လည်းဖုန်းဆက်တယ်… မနက်ဖြန်(၇)ဦးကိုလွှတ်လိုက်ဘို့ပြောလိုက်တယ်…..
ဒါနဲ့တည်းခိုခန်းပြန်ကြတယ်…ကိုမောင်မောင်ကလက်မှတ်ပြန်ဝယ်ရတယ်….မနက်တုံးကလည်း ဂိတ်မှာကိုယ်တို့(၇)ယောက်ကိုလူတွေက ဘယ်လိုထင်မလဲ… ဒီကုလားကမိန်းမ(၅)ယောက်ကိုနယ်စပ်ခေါ်သွားပြီး ဘာလုပ်မှာလဲ…. မိန်းမ(၅)ယောက်ကလည်းအဖွားကြီးတွေဆိုတော့ဘာလုပ်တာပါလိမ့်ဆိုပြီး….ပြောကြမှာလို့ ဟာသ ပြောပြီးရီကြသေးတယ်….
၀က်အူချောင်းတွေယူလာလို့အထစ်အငေါ့ဖြစ်တာလားလို့ တွေးမိကြသေး တယ်…
သွားတယ်…၂၀၀၀ကျပ်လောက်ပါသွားတယ်….ည၁၂နာရီလောက်တံခါးကိုတ၀ုန်းဝုန်းထုသံကြားလို့ ဖွင့်ပေးတော့ဧည့်စာရင်းစစ်တာတဲ့….သားတွေရေးလိုက်တဲ့စာတွေကလည်းပါလာတာဆိုတော့ လန့်နေကြတာပေါ့….
နောက်မှသိရတာက တည်းခိုခန်းနဲ့မနီးမဝေးမှာ ယောက်ကျားတစ်ယောက်ကိုမိန်းမ(၄)ယောက်က
( ၁၇.၃.၁၉၉၂ )
သိန္နီလွန်ပြီးကွတ်ခိုင်ရောက်တော့ထမင်းစားကြတယ်…ကွတ်ခိုင်ကျော်တော့နမ့်ဖတ်ကာထဲရောက်တယ်… ဒီလိုနဲ့မူဆယ်ထဲဝင်လာတော့ လမ်းတွေအရမ်းဆိုးတယ်… ကားခုန်ရင်ခေါင်းနဲ့အမိုးနဲ့တက်ဆောင့်တဲ့အထိဖြစ်တယ်…၅း၀၀နာရီလောက်မူဆယ်ကိုရောက်တယ်.. လှိုင်းတက်တည်းခိုခန်းမှာဘဲတည်းကြတယ်….အမျိုးသမီး(၅)ယောက်ကအခန်း(၁၃)မှာရတယ်…အန်တီ
ကြီးက၁၃ဂဏန်းမကြိုက်လို့( A )လို့ပြောင်းရေးပေးကြတယ်…ကိုမောင်မောင်ကထလရ(၂၃)/ဆွယ်ကို သတင်းပို့ရတယ်….ဗိုလ်ကြီးမင်းလွင်နဲ့တွေ့တယ်…လားရှိုးကလိုဖြစ်မှာစိုးလို့ပြောတော့ မနက်စောစော ဒီဘက်ဂိတ်မဖွင့်ခင်ထွက်သွားပါလို့ပြောတယ်တဲ့……
မူဆယ်ညဈေးတန်းသွားပြီး ထမင်း၅ကျပ်ဟင်း၅ကျပ်နဲ့စားကြတယ်….. မနက်ဖြန်တရုပ်ပြည်ဘက်ကူးမဲ့အကြောင်းအိမ်တွေကိုစာရေးကြတယ်… စာတွေမရောက်ဖူးဆိုတာနောက်မှသိရတယ်…..
( ၁၈.၃.၁၉၉၂ )
၄း၀၀နာရီထိုးတော့ တည်းခိုခန်းကထွက်ပြီး ညဈေးဘက်သွားကြတယ်….. အဝေးပြေးဂိတ်မှာကားတစ်စင်းငှားပြီးနယ်စပ်ဂိတ်ဘက်သွားကြတယ်… ..မြန်မာဂိတ်ကမဖွင့်သေးတော့ တရုပ်ပြည်ဘက်ကိုလမ်းကြိုလမ်းကြားကဖြတ်ပြီးနာရီဝက်လောက်သွားရတယ်… တရုပ်ပြည်ကြယ်ခေါင်ဂိတ်ကိုရောက်သွားတယ်… မူဆယ်နဲ့ကြယ်ခေါင်က မြေတစ်ဆက်တည်းဘာမှမခြားဘူး….
တရုပ်ပြည်ထဲရောက်တော့ဂိတ်မဖွင့်သေးလို့စောင့်နေရသေးတယ် …စောင့်ရင်းနဲ့အိမ်သာသွားကြတော့ အိမ်သာကဗမာအိမ်သာတွေနဲ့လုံးဝမတူဘူး…. .တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘေးအကာနိမ့်နိမ့်လေးတွေဘဲကာထားတယ်…ရှေ့တည့်တည့်မှာအကာလုံးဝမထားဘူး ညစ်ပတ်တာလည်းအလွန်ဘဲ…ရေလုံးဝမသုံးဘူး…..နောက်တစ်ကြိမ်မသွားချင်တော့ဘူး….
.ပြီးတော့တရုပ်ကားနဲ့ရွှေလီကိုဆက်ထွက် ခဲ့တယ်…. နာရီဝက်လောက်နေတော့ ရွှေလီမြစ်ကိုဖြတ်တဲ့တံတားကိုဖြတ်ရတယ်…..နောက်တော့
ရွှေလီမြို့ထဲကိုရောက်လာကြတယ်…ယိုးဒယားတန်းကိုဖြတ်ပြီး ချစ်လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ကိုသွားကြတယ်… ချစ်လ္ဘက်ရည် ဆိုင်က ABSDF ကဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ပေါ့… အဲဒီမှာစခန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပေးမည့်သူနဲ့သွားတွေ့ရတယ်
…ရောက်ရောက်ချင်းမတွေ့ရသေးဘူး… CS သံချောင်းရဲ့ရဲဘော်လေး မိုးကြိုးဆိုတာနဲ့တွေ့တယ်… အသက်၂၀တောင်ရှိပုံမရဘူး…မိုးညှင်းဘက်ကလို့ပြောတယ်… လ္ဘက်ရည်ဖျော်တဲ့မောင်ညွန့်ဆိုတာတွေ့တယ်….နံပြားတို့ပလာတာတို့လုပ်တဲ့
မကြာခင်မှာဘဲ အရပ်ရှည်ရှည် ပါးသိုင်းမွှေး မုတ်ဆိတ်မွှေးနဲ့ ကုလားတစ်ယောက် ရောက်လာတယ်…
ကိုမောင်မောင်နဲ့ပြောကြပြီး နောက်မိတ်ဆက်ပေးတယ်….သားသမီးတွေနေကောင်းကြရဲ့လား လို့မေးကြတယ်..အားလုံးကောင်းပါတယ်လို့ပြောတယ်…
မကြာခင်မှာရှေ့နားက စားပွဲကနေ ကျောင်းသား၃ယောက်ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နဲ့လုပ်နေတယ်…..
အောင်နိုင်ကိုသိတာက သားကဘောင်ဒရီလမ်း သူတို့ပါတီမှာနေတုံးက ကိုယ်သွားရင်းလာရင်းနဲ့ မန္တလေး(ဆေး)က အောင်နိုင်လို့ ပြောပြထားလို့သိတာပါ…ဒါပေမယ့်သူက မမှတ်မိတာလား မသိချင်ဟန်ဆောင်နေတာလားမသိဘူး…ကိုယ်ကလည်းသိပေမယ့် မသိဟန်ဆောင်နေပါ တယ်….. သူ့ကိုဥက္ကဋ္ဌဆိုတာလည်းသိပါတယ်…ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ မြက်ခင်းသစ်ထဲမှာသူတို့အကြောင်းပါထားတာကိုး…..သွားခါနီး သမီးအကြီးက အောင်နိုင်အဲဒီမှာဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်နေတာလို့ပြောလိုက်သေးတယ်…..
ဒါပေမယ့်သူတို့အဖွဲ့က ကိုယ်တို့အဖွဲ့ကို ဘာမှနှုတ်ဆက်တာမရှိဘူး….. စိတ်ထဲမှာတော့တော်တော်လူပါးဝတယ်လို့…သူတို့ကိုယ်သူတို့ဥက္ကဋ္ဌတွေဆိုပြီးမိဘတွေကိုမခန့်လေးစား လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေ…..
Very touched post!!! Shame on those who were mad on power!!!